तेह्रथुम पावरको आईपीओ बाँडफाँड कहिले ? यस्तो छ बिक्री प्रबन्धकको जवाफ - टि. एल. एन पोस्ट
Home अर्थ तेह्रथुम पावरको आईपीओ बाँडफाँड कहिले ? यस्तो छ बिक्री प्रबन्धकको जवाफ
तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेकाे साधारण सेयर (आईपीओ) काे बाँडफाँड कहिले हाेला भन्ने सबैकाे चासाेकाे विषय बनेकाे छ । लगानीकर्ताकाे यही चासाे मेटाउन हामीले कम्पनीकाे आईपीओकाे बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडसँग कुरा गरेका छाैँ ।
क्यापिटलका अनुसार हालसम्म आईपीओमा प्राप्त भएकाे आवेदनहरूकाे भेरिफाई गर्ने कार्य भइरहेकाे छ । भेरिफिकेशनकाे काम सम्पन्न भएपछि बाँडफाँडकाे काम हुनेछ ।
कम्पनीले भदौ ९ गते, बुधबारबाट भदाै १३ गते, आइतबारसम्म सर्वसाधारणहरुका लागि जारी पूँजीकाे २० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री खुल्ला गरेकाे थियाे । जसमध्ये ५% अर्थात् ४० हजार कित्ता म्युचुअल फन्डलाई, २% अर्थात् १६ हजार कित्ता कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित गरी बाँकी ७ लाख ४४ हजार कित्ता सर्वसाधारणलाई छुट्याइएकाे थियाे ।
अन्तिम दिनसम्म २३ लाख ९६ हजार ३ सय ४८ जना आवेदकले ३ कराेड १२ लाख ४६ हजार ९ सय १० कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए । यो आवेदन सर्वसाधारणका लागि माग गरिएको भन्दा ४२ गुणा बढी हो ।
मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले कम्पनीको आईपीओ गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड हुनेछ । अन्तिम तथ्यांक हेर्दा ७४ हजार ४ सय जना आवेदकहरूले १० कित्ताका दरले सेयर हात पार्नेछन् । बाँकी २३ लाख २१ हजार ९ सय ४८ जनाकाे भने हात खाली हुनेछ ।
Previous articleदेशका अधिकांश स्थानमा भारी बर्षा , यस्तो छ आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान
Next articleएमसिसी पास गर्ने सरकारको तयारी, देशभर सुरक्षा सतर्कता बढाइयो
भीम रावललाई माधव नेपालले भने– राजीनामा फिर्ता लिनुस्, बाँकी कुरा पछि गरौँला